Dowladda Bangladesh oo dib usoo celisay Qaar ka tirsan Qaxootiga Muslimiinta Rohingiya ee kasoo firxday dalka Barma.
Wednesday November 30, 2016 - 08:43:58 in Wararka by Super Admin
Dowladda Bangladesh ayaa dib usoo celisay qaar ka tirsan Qaxootiga Muslimiinta ee Rohingiya ee kasoo firxday gumaadka ay ku heyso Xukuumadda Barma.
Dowladda daba dhilifka ah ee Bangladesh ayaa lagu soo warramayaa inay dib usoo celisay doomo ay la socdeen qaar ka tirsan Muslimiinta Rohingiya oo doonayay inay galaan dalkaasi , iyadoo Kumanaan Muslimiin ah ay todobaadyadii lasoo dhaafay u firxadeen dalka Bangladesh iyagoo ka cararaya xasuuqa iyo gumaadka ay kula kulmeen Ciidamada Dowladda Barma iyo Kooxaha Buudiyiinta.
Madaxa Ciidamada ilaalada Xuduudda ee magaalada Taknaaf ee wadanka Bangladesh ayaa u sheegay Wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP inay dib u celiyeen illaa Sideed doonyood oo ay la socdeen Qaxooti badan oo Muslimiin ah, kuwaas oo ku safrayay webiga lagu magacaabo Naaf ee kala qeybiya Gobolka Raakhiin ee dalka Barma iyo Koonfurta dalka Bangladesh.
Sarkaal u hadlay Xukuumadda Daka ayaa sheegay in sidoo kale maalintii Axadda ay celiyeen illaa lix doonyood, isagoona tibaaxay in doomaha ay u diideen inay soo galaan dalka Bangladesh ay midiiba sidday dad qaxooti ah oo gaaraya 12-13 ruux.
Mas;uuliyiin Maxalli ah ayaa sheegay in labadii todobaad ee lasoo dhaafay, Ciidamada ilaalada Xuduudda ee Dalka Bangladesh inay dib u celiyeen inkabadan kun ruux oo qaxooti ah oo ka tirsanaa Muslimiinta Rohingiya ee kasoo cararaya gumaadka ka socda dhulkooda ee ay ku heyso Xukuumadda Buudiyiinta ee Wadanka Barma, islamarkaana soo maciin biday wadanka jaarka la ah ee Bangladesh, hase yeeshee Maamulayaasha Wadanka Bangladesh ayaa go'aan ku gaaray inay dib u celiyaan dadkaas qaxootiga ah.
Dhinaca kalena Gole ay leeyihiin Muslimiinta Rohongiya ee ku nool Waddamada Yurub ayaa Bayaan ay soo saareen waxay Muslimiinta Caalamka ku nool ugu baaqeen inay u gurmadaan walaalaha Muslmiinta ah ee gumaadka kala kulmaya Buudiyiinta, iyadoona Bayaanka uu tilmaamay in dhowrkii todobaad ee lasoo dhaafay la barakciyay inkabadan Soddon kun oo Muslimiin ah, halka kumanaan kalena ay ka carareen deeganadii ay ku noolaayeen.